China Automatic6Heads Tomato/Chilli Sauce Glass Jars/ Bottle Filling Sealing Machine စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |ခုန်ပါ။
အလိုအလျောက်6ခေါင်းခရမ်းချဉ်သီး / ငရုတ်သီးဆော့စ် ဖန်အိုး / ပုလင်းအဖုံးအပိတ်ပိတ်စက်
ဖန်၊ သတ္တု၊ ပလပ်စတစ်
အ၀တ်အထည်၊ အဖျော်ယမကာ၊ ဓာတုဗေဒ၊ ကုန်စည်၊ အစားအသောက်၊ စက်ယန္တရားနှင့် ဟာ့ဒ်ဝဲ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ
ပုလင်းများ၊ ဖန်ပုလင်းများ၊ အိုးများ
အွန်လိုင်းပံ့ပိုးမှု၊ ဗီဒီယိုနည်းပညာပံ့ပိုးမှု၊ အခမဲ့အပိုပစ္စည်းများ၊ ကွင်းဆင်းတပ်ဆင်မှု၊ ခန့်အပ်မှုနှင့် လေ့ကျင့်မှု၊ ကွင်းဆင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ပြုပြင်မှုဝန်ဆောင်မှု
Filling Capping တံဆိပ်ခတ်ခြင်း။
တစ်လလျှင် ဖန်ပုလင်းအဖြည့်စက်5Set/Sets
1. တည်ငြိမ်သော သစ်သားအထုပ်သည် စက်ကို ရိုက်ချိုးခြင်းနှင့် ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။2.ဒဏ်ရာ ပလပ်စတစ်ဖလင်သည် စက်ကို စိုစွတ်စေပြီး ချေးမတက်အောင် ထိန်းပေးသည်။3.မီးခိုးငွေ့ကင်းစင်သော အထုပ်သည် ချောမွေ့သော အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးကို ကူညီပေးသည်။4.အထုပ်မပါဘဲ ကွန်တိန်နာတွင် အရွယ်အစားကြီးသော စက်ကို ပြုပြင်ပေးပါမည်။
အရေအတွက် (အစုံ) ၁ – ၁ > ၁
အီးအက်စ်တီ။အချိန်(ရက်) 60 ညှိနှိုင်းရန်
အလိုအလျောက်6ခေါင်းခရမ်းချဉ်သီး / ငရုပ်သီးဆော့စ် ဖန်အိုး / ပုလင်းအဆာတံဆိပ်ပိတ်စက်
အလုံပိတ်ခံတွင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကို အလိုအလျောက် ဖြည့်သွင်းပြီး စနစ်ထဲသို့ ဝက်အူ၏ သယ်ယူပေးသည့် ခါးပတ်ပုလင်းနှင့် အစာကျွေးကိရိယာကို ဆေးကြောပါ။ဖန်ပုလင်း ပလပ်စတစ် ပုလင်းများအတွက် အရည်ဖြည့်ခြင်းနှင့် တံဆိပ်ခတ်ခြင်းအတွက် သင့်လျော်သည်။
1. Stainless Steel ဖွဲ့စည်းပုံ၏ အလုံးစုံ အသွင်အပြင်၊ ကျစ်လစ်ပြီး လှပသော၊ အရည်ဖြည့်သည့်အဆင့် အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်မှု၊ အရည်အဆင့် အမြင့်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။
2. ထိန်းချုပ်ရန် LG ပရိုဂရမ်မာ ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၊ တင်သွင်းလာသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ခြေလှမ်းမဲ့ မြန်နှုန်းစည်းမျဉ်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပင်မလူသား-မန်ချိုင်းကြားခံလိုင်း။
3. Rotary Filling Sealing နည်းလမ်း၊ အဖွဲ့အစည်းများကို ဖုံးအုပ်ရန် ပုလင်းမရှိ၊ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းသည် ယုံကြည်စိတ်ချရကြောင်း သေချာစေရန်
4. သံလိုက်စွမ်းအားကိရိယာ၊ အလိုအလျောက်ချိန်ညှိနိုင်သော ဝက်အူထိပ် torque၊ အဖုံးတံဆိပ်ခတ်ခြင်း အရည်အချင်းပြည့်မီမှုနှုန်းသည် မြင့်မားသည်။
2 အသီးကို သန့်ရှင်းစေပြီး ပျက်စီးမှုကိုလည်း သက်သာစေရန် လှိုင်းစီးခြင်းနှင့် ပွက်ပွက်ဆူခြင်း၏ အထူးဒီဇိုင်း။
အခွံခွာခြင်း၊ ပျော့ပျောင်းခြင်းနှင့် သန့်စင်ခြင်း Monobloc (Pulper)
1. ယူနစ်သည် အခွံခွာ၊ ပျော့ဖတ်နှင့် သစ်သီးများကို အတူတကွ သန့်စင်ပေးနိုင်သည်။
2. ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အပေါ်အခြေခံ၍ strainer မျက်နှာပြင်၏အလင်းဝင်ပေါက်ကိုချိန်ညှိနိုင်သည် (ပြောင်းလဲမှု) လုပ်နိုင်သည်
2. ယူနစ်သည်အဆင့်မြင့်နည်းပညာ၊ ကြီးမားသောစာနယ်ဇင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသည်၊ အလိုအလျောက်ဒီဂရီမြင့်မားသည်၊ လည်ပတ်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသည်။
4. ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနည်းပါးပြီး စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်း။
4. preheat နှင့် extinguish enzyme ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု မအောင်မြင်ပါက သို့မဟုတ် မလုံလောက်ပါက၊ ထုတ်ကုန်သည် ဖန်ပြွန်ထဲသို့ အလိုအလျောက်ပြန်သွားပါသည်။
3. မှန်ကန်သောပြွန်လွှမ်းခြုံမှုသေချာစေရန် အရည်ဖြန့်ဖြူးမှုစနစ်များ၏ အထူးဒီဇိုင်း။ဖြန့်ဖြူးသူသည် ပြွန်တစ်ခုစီ၏ အတွင်းမျက်နှာပြင်တွင် ဖလင်ဖွဲ့စည်းမှုကို သေချာစေသည့် ဖိဒ်သည် ကာလန်ဒီးယား၏ထိပ်တွင် ဝင်ရောက်သည်။
4. အခိုးအငွေ့ စီးဆင်းမှုသည် အရည်သို့ တွဲလျက် ရှိနေပြီး အခိုးအငွေ့ ဆွဲယူခြင်းသည် အပူကူးပြောင်းမှုကို တိုးတက်စေသည်။အခိုးအငွေ့နှင့် ကျန်အရည်များကို ဆိုင်ကလုန်းခွဲထုတ်စက်တွင် ပိုင်းခြားထားသည်။
5. ခွဲထွက်ကိရိယာများ၏ ထိရောက်သော ဒီဇိုင်း။
6. များစွာသောအကျိုးသက်ရောက်မှုအစီအစဉ်သည် ရေနွေးငွေ့စီးပွားရေးကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။
1. စည်းလုံးမှုတွင် ထုတ်ကုန်လက်ခံသည့်တိုင်ကီ၊ အထူးအပူပေးထားသောရေတိုင်ကီ၊ ပန့်များ၊ ထုတ်ကုန်နှစ်ခုစစ်ထုတ်စက်၊ tubular superheated water generate system၊ tube in tube heat exchanger၊ PLC control system၊ Control cabinet၊ steam inlet system၊ valves နှင့် sensors စသည်တို့ပါဝင်သည်။
2. အီတလီနည်းပညာကို ထည့်သွင်းပြီး ယူရိုစံနှုန်းနှင့် ကိုက်ညီသည်။
3. ကြီးမြတ်သောအပူလဲလှယ်ဧရိယာ၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပြီး ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူသည်။
4. မှန်ဂဟေဆက်ခြင်းနည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီး ချောမွေ့သောပိုက်အဆစ်ကို ထိန်းသိမ်းပါ။
5. ပိုးမွှားမွှားများ လုံလောက်စွာ မရှိပါက အလိုအလျောက် နောက်ပြန်ဆုတ်ပါ။
6. CIP နှင့် auto SIP ကို ​​aseptic filler ဖြင့် တွဲသုံးနိုင်သည်။
7. အရည်အဆင့်နှင့် အပူချိန်ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ထိန်းချုပ်ထားသည်။
ယခင်- ဂါလံ ၃၀၀ ပိုးသတ်အိတ်ဖြည့်စက်
Composite Can အတွက်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းစက်
အစားအသောက်နှင့် သောက်စရာအတွက် ပုလင်းဖြုတ်စက်...
BIB Single နှင့် Double Head Aseptic Filling Mach...
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Semi-automatic Vacuum Sealing M...
Liquid Metering Bag အလိုအလျောက်ထုပ်ပိုးသည့်စက်